Kana uri kufambidzana musikana uyo anoratidza muduku rudo ungangobvotomoka rokukanda munyika tauro. Unogona kuva munhu nguva dzose kutanga chaiko nevateereri akadai vachimbundirana, cuddling, kana kutsvoda. Kunyange zvazvo iye ari kugamuchira kuratidzirana kwako rudo, iye sokuti kuva wakaomera kutangisa nemasaini izvi ari oga. Kana padzakacherechedza izvi kubva zuva renyu uye unokudenhai, tora chiito zvino kuti ichengetedzwe makakatanwa ukama hwako.
Rondedzera Manzwiro Ako
Zvakakosha kunzwisisa kuti musikana wako haagoni kuverenga pfungwa dzako uye ave asina pfungwa sei maitiro ake kunokukanganisa. ukama nyanzvi, Dr. Karen Sherman anosimbisa kuti zvakakosha kuti utaurire mudiwa wako kuti unonzwa. zvichida, varo unaffectionate maitiro rabva iwe unonzwa vakaramba, kure naye, zvikundikane, kana kutombonaka. Chero zviri, kudhonza naye parutivi nokuda kwokukurukurwa chakakura uye inzwi sei naye zviito sei iwe.
Wabudisa kuziva kuti chii chichikusvota, inguva kuchera zvakadzika. Bvunza mibvunzo kuti abatsire kuziva chinokonzera musikana wako maitiro. Iye Angangodaro yapfuura ukama umo misi yake havana zvinoda yakawanda rudo. Uyezve, kana ukama hwako huchiri nokururamisira itsva, iye angada nguva yakawanda kuti sunungukei kwamuri uye zvinodiwa ukama. Kana vaviri venyu ndokunyatsoona zvichibvira zvikonzero kwokushaya ake rudo, Funga nzira iyo vaviri unogona kuva zvaunoda akasangana.
yeuka, unofanira kutaura manzwiro nemusikana wako nenzira tarasika kwamuri, kunyange kana iye asingadi danana navo. Munyaya yake "10 Zvinoitwa Altamente Affectionate People", Dr. Kory Floyd rinodonongodza zvakawanda kuratidza rudo akadai rine yepamusoro nokuzviremekedza, zvishoma kutya madanana, uye mukuru kushinga mupfungwa. Uyezve, vanotsvakurudza Andrew Gulledge, Michelle Gulledge, uye Robert Stahmann akaratidza kuti mumuviri rudo kunowedzera ukama vagutsikane. Pasinei nemusikana wako asingakoshesi rudo, Kuriita pachena kwako kuratidza rudo Akakubvumidza kuti maximize pamusoro zvakanaka zvaitika izvi uye kuvandudzika noukama mune ramangwana.
Ita Chisarudzo Chakaoma
Iuye kusvikira paunoziva kuti, pasinei nemusikana wako yepamwoyo zvinoitwa, uchiri kugutsikana mune ukama. Dr. Sherman anoti chinhu chinokosha chero ukama kudzidza kugamuchira mumwe misiyano. Kana ukaona kuti musikana wako kuti kusava rudo anoramba zvinokunetsa here, zvingava zvakanaka kuti agumise ukama noushamwari uye kuwana munhu anogona kuzadzisa unoda rudo.
Nina aifanira kuona Daniel. Akanga achienda kutora nzombe nenyanga dzavo, kana kupfuura nomazvo, imbwa ...